PEMBROKE WELSH CORGI DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Pembroke Welsh Corgi Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Baozi the Pembroke Welsh Corgi oo 5 jir ah— 'Baozi waa eey aad u jecel, adeecsan, eey tamar badan leh oo carruurta la dhaqan.'
Liiska eeyaha eyda Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi waa mid dheer (jidh ahaan marka la barbar dhigo lugaha), kuna hooseeya eeyga dhulka. Dhabarkiisu dhab ahaan kama dheereeyo kuwa eyda badankood 'lugahooda waa kuwo aad u gaaban marka la barbardhigo. Qalfoofku waa mid ballaadhan oo fidsan oo u dhexeeya dhegaha. Joogsigu waa dhexdhexaad. Khadka sare waa heer. Sanka waa madow daankuna wuxuu ku kulmaa qaniinyada maqaska. Indhaha ovalku waa midabyo bunni ah oo kuxiran midabka jaakada eeyga. Qarka isha waa madow. Dhegaha kacsan ayaa cabbirkoodu dhexdhexaad yahay, waxyarna way ka soo dhacayaan meel wareegsan. Lugaha waa kuwo aad u gaaban. Cagaha waa qaab muuqaal ah. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Eeygu wuxuu mararka qaarkood ku dhashaa isagoo aan lahayn dabada, waxaana loo xiraa sida ugu yar ee suurtogalka ah markuu haysto dabada. Xusuusin: waa sharci daro in dabada la dhigo meelo badan oo Yurub ah. Jaakada laba-geesoodka ah waxay leedahay jaakad gaaban, cufan, cimilada u adkaysata oo leh jaakad dusha ka dheer oo aan sii weyneyn Qaar ka mid ah Corgis waxay ku dhashaan jaakado dhaadheer oo loo yaqaan 'fluffy Corgi' ama 'Corhaim longhaired'. Eeyahaani ma samaystaan ​​halbeegga qoran mana la muujin karo. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah guduud, xayd, fawn, madow iyo midab leh calaamado cad. Badanaa calaamado cadcad ayaa lugaha, laabta, qoorta iyo qaybo ka mid ah xuubka.
Qaar ka mid ah farqiga u dhexeeya Pembroke Welsh Corgi iyo Cardigan Welsh Corgi waa in dabada 'Pembroke' badiyaa la dhalo ama la jarjaro markay dhalato. Dabo goynta ayaa sharci darro ka ah dalal badan, xitaa waddammada ay sharci ka tahay, dad badan ayaa ka gaabsada goynta dabada oo uga tegaya si dabiici ah. Halka Cardigan uu dabiici ahaan leeyahay dabada dheer oo goynta dabada aan laga aqbalin heerka qoraalka. Pembroke caadi ahaan wuxuu leeyahay lugaha toosan maadaama uusan u ekaanin dherer ahaan sida Cardigan madaxa Pembroke guud ahaan waa kuwo camiran oo dhegaha leh way ka yar yihiin wayna ka wada dhaw yihiin Cardigan sidoo kale Pembroke wuxuu u muuqdaa inuu ka fudud yahay Cardigan.
Pembroke Welsh Corgi waa mid caqli badan, daacad ah, awoodna u leh inuu raalli geliyo milkiilihiisa. Corgis aad ayey u firfircoon yihiin waxayna ku fiican yihiin carruurta illaa iyo inta eeygu u arko aadanaha inuu ka sarreeyo isaga. Difaac iyo adkeyn, waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan, iyo bandhigyo iyo eeyo aad u fiican. Ka digtoonow shisheeyaha, waa inay ahaato mid sax ah bulsho lana tababaray markay weli yartahay. Waxay ubaahan yihiin dadkooda inay yeeshaan goaansaday, qaab jacayl isdaba joog ah , muujinaya hoggaan adag laakiin deggan la habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine si looga fogaado dabeecadaha ilaalinta badan sida qof weyn Waxay mararka qaarkood isku dayaan inay dad daaqaya adoo cagaha wax ka siinaya, inkasta oo ay awoodaan oo ay tahay in lagu tababaro inaysan sidan sameynin. Pembroke wuxuu u eg yahay inuu ciyo wax badan wuxuuna sameeyaa ilaalin wanaagsan. Haddii aad aragtid eeygaaga inuu ku ciyey si uu ula xiriiro, waxaad u baahan tahay inaad eeyga aamusiso oo aad eegto kanaga xirfadaha hogaaminta . Ey kaa oohinaya qaabkaas ayaa muujinaya astaamo arrimaha xukunka . Hawlwadeennada aadanaha waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan eeyga in ku xadgudubka eeyaha kale ay tahay dhaqan aan loo baahnayn. Badanaa way fiicantahay xayawaan aan xashiish ahayn . Ha u oggolaan Corgi inuu horumariyo Cudurka Dog yar .
Dhererka: Ragga 10 - 12 inji (25 - 30 cm) Dumarka 10 - 12 inji (25 - 30 cm)
Miisaanka: Ragga 24 - 31 rodol (10 - 14 kg) Dumarka 24 - 28 rodol (11 - 13 kg)
Ku soo dhowaanshaha PRA, glaucoma iyo xanuunada dhabarka. Miisaan buu yeeshaa si fudud. Ha ku badin hadii ay baruurtaan waxay sababi kartaa dhibaato dhabarka ah.
Corgis waxay ku fiicnaan doontaa guri gudaheeda haddii si ku filan loo jimicsado. Leyli ku filan waxay ku xasilloon karaan gudaha, laakiin waxay noqon doonaan kuwo firfircoon haddii ay wax ka dhinmaan. Wuu fiicnaan doonaa la'aan deyr la'aan ilaa inta loo qaadayo socod maalinle ah.
Eeyo yar yar oo dabiici ah oo firfircoon, waa in had iyo jeer lagu dhiiri galiyaa inay sidaas ahaadaan. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a maalin kasta, socod dheer . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Qiyaastii 12-15 sano.
Qiyaastii 6 ilaa 7 eyyo
Dharka jilicsan, dhererka dhexdhexaadka ah, jaakad biyaha u adkeysata ma sahlana. Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Koodhka ayaa la daadiyaa laba jeer sanadkii.
Cardigan Welsh Corgi wuxuu ka da 'weyn yahay Pembroke Welsh Corgi, iyada oo Pembroke lagu soo koriyey Cardigan. Labada nooc ee Corgi waxay noqon karaan farac ka mid ah Keeshond , Pomeranian , Xirmooyinka iyo Iswiidhishka Vallhund . Qaarkood waxay yiraahdaan Cardigan ka weyn wuxuu ka yimid Cardiganshire oo ay keeneen Celts 1200 BC. Halka, awoowayaasha Pembroke ay soo bandhigeen Flemish towayaal Celts-kii 1100s. Si kasta oo ay dacwadu ahaato, Cardigan iyo Pembroke Welsh Corgis waa la dhexgalay oo loo tixgeliyey inay isku mid yihiin illaa 1934, markii garsoore show uu u maleynayay inay aad u kala duwan yihiin wuxuuna u kala saaray laba nooc oo kala duwan. Kadib markii ay kala tageen Pembroke wuxuu ku helay caan wuxuuna ilaa maantadan ka caan yahay Cardigan. Magaca 'corgi' wuxuu ku gaar yahay nooca eyga ee Cymreig (Welsh). 'Eyga' ee Cymreig (Welsh) waa 'Ci' ama haddii si tartiib ah loogu beddelo 'Gi,' markaa Corgi. Pembroke runtii waxaa aqoonsaday AKC sanad ka hor Cardigan. Cardigan waxaa la aqoonsaday 1935 iyo Pembroke 1934. Corgis waxaa loo adeegsaday wadayaasha lo'da, ugaarsadayaasha xayawaanka iyo ilaalada beeraha. Waxay kaxeynayeen lo'da iyagoo ku qaylinaya isla markaana cabaya cidhibta lo'da halkii ay ka ahaan lahaayeen oo kaliya inay dhaqdaan. Eeyga dhererkiisu hooseeyo ayaa ka caawisay inuu ka leexdo dariiqa lo'da laadayo.
Dhaqashada, Daaweynta AKC
Collins ardayga Corgi
Nemo the Pembroke Welsh Corgi oo ah 1 sano jir
sawirada eey weyn oo pyrenees ah
Lucy the Pembroke Welsh Corgi
Kani waa Chip, seddex-geesle ah Pembroke Welsh Corgi eey.
'Abby waa Pembroke Welsh Corgi oo halkan lagu muujiyay isagoo jira hal sano. Aad bay u macaan tahay oo jilicsan tahay, oo way u fiican tahay awooweyaasha. Waxay jeceshahay inay dhugato cidhibtooda waxayna isku daydaa inay ku ilaaliso qayb ka mid ah ardaaga. Magaca aabaheed waa Cowboy Giz hooyadeedna waa Katy Get Ur Gun. '
Clarabel ayaa si sharaf leh halkan loogu muujiyey iyada oo ku guuleysatey cinwaankeedii ugu horreeyey markii ay 9 bilood jir tahay.
Clarabel the Pembroke Welsh Corgi xusuusinta
Clarabel the Pembroke Welsh Corgi wuxuu ku guuleystey horyaalkeedii ugu horreeyay markii ay 9 bilood jir tahay
Clarabel the Pembroke Welsh Corgi oo ku sii jeeda gurigiisa ka dib maalin guul leh
Clarabel the Pembroke Welsh Corgi ayaa habeenkii baxay
Eeg tusaalooyin badan oo ah Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi Sawirada 1
Pembroke Welsh Corgi Sawirada 2
Eeyaha Corgi: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
sawirada cows bulug oo buluug ah
shaxda cabbirka adhijirrada australia
buluug Pit Staffordshire Maraykan Brindle
deenish weyn brown leh dhibco madow
Chow Chow shiba inu qaso